Harena an-kibon’ny tany aty Afrika : vonona hanampy amin’ny fotodrafitrasa ry zareo Anglisy · Aponga
Harena an-kibon’ny tany aty Afrika : vonona hanampy amin’ny fotodrafitrasa ry zareo Anglisy
Fihaonan-dehibe maneran-tany fanao isaky ny volana febroary, ao Afrika Atsimo, momba ny harena ambanin’ny tany (Mining Indaba). Nanamafy ny fahavononany ny fanjakana britanika amin’ny fanohanana ny aty Afrika, anisan’izany i Madagasikara. Ny 9 febroary teo, nisy fiaraha-nidinika notarihin’ny masoivoho britanika ao Afrika Atsimo, Nigel Casey, niresahana tamina solontena afrikanina. Nisy delegasiona malagasy nandray anjara tamin’izany avy ao amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany. Nampahafantarana azy ireo ny Africa infrastructure board, fotodrafitrasa hanohanan’ny Britanika ny aty Afrika, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany.
« Tsy ahitam-bokatra firy ny harena an-kibon’ny tany raha tsy misy fotodrafitrasa matanjaka », hoy ny masoivoho britanika, Nigel Casey. Tsy vitsy ny firenen-kafa, na tsy nambaran’ity ambasadaoro britanika ity aza, ny miditra mifaninana amin’izany aty Afrika. « Koa avy amin’ity Africa infrastructure board ity ny fiaraha-miasa vaovao, ivondronan’ny mpandray anjara britanika maro, fanjakana na orinasa tsy miankina matanjaka, hanampy ny tany afrikanina », hoy ihany i Nigel Casey. Avy amin’io Africa infrastructure board io izany ny endriky ny tolotra vaovao ho an’ny fiaraha-miasa aty Afrika sy Madagasikara.
Politika vaovao izao no hoentin’ny fanjakana britanika hamatsiam-bola, amin’ny alalan’ny Africa finance corporation. Nitondra fanazavana momba izany i Oliver Andrews, talen’izany AFC izany. Miainga avy amin’ny lalàna fototra britanika ny fifanarahana rehetra, miaraka amin’ireo mpahay lalàna, toekarena ary teknika.
Novelabelarina tamin’ireo mpivory momba ny fotodrafitrasa mifandraika amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany aty Afrika. Naseho tamin’izany, ohatra, ny avy amin’ny orinasa britanika miasa any Angola. Mifandray amin’izany ny fampandrosoana ny sehatra maro hafa, toy ny lalamby, seranan-tsambo, fambolena, fiarovana ny tontolo iainana. Eto Madagasikara, efa ataon’i Japana izao ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina, manampy ny orinasa Ambatovy.
Ino Vaovao : Politique & Diplomatie
ANTOKO HIARAKA ISIKA : Hanatanteraka fihaonam-be nasionaly ireo mpikambana